Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ama-dollar ayisigidi. NgoMashi we-2015, umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch wabekwa ku- $ 1 miljard. Noma kunjalo, ukubalwa kwentengo kungabhekwa njengokuncishiswa okuthile ngabathile, uFarfetch akuyena ukuphela kwabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ayizigidi eziningi. Gal Gal, I-Lucky Group, I-Shoe Dazzle kanti nabanye abaningi baye baxhaswa ngemali yezimali zokuzibophezela ukuze kutholakale amashumi ezinkulungwane zamaRandi.
Ngakho-ke uma unokuthambekela okubheke emcabangweni, wokuthi ungaqala ibhizinisi lokuthengisa ngemfashini elingelakho, ngizokukhombisa ezintweni ezimbalwa ezisiza ukwenza ukuba abathengisi bemfashini online bakuphumelaywahuah.
Noma yiyiphi yezingqikithi izosebenza kahle kakhulu ukudala isitolo se-verkeer esitolo esiphakathi sezemfashini noma imikhiqizo efanayo yokudayisa.
Amafomethi weMenyu amaningi nge-aanpasbaarheid enkulu
Ayikho i-warboel lokho okuhlala njalo futhi okuncane lapho kunokwenzeka khona
Kunento eyodwa futhi okufanele uyiqaphele, ezinye izingqikithi zemfashini ngokukhethekile entweni eyodwa yezinto ezimbili ukubhuloga noma ukuzithengisa. Ingqikithi versterk yokuthengisa yemfashini ingasetshenziselwa ukudala amabhlogi anamandla, ngenkathi inganqikazi amandla wewebhusayithi yakho ukuthengisa imikhiqizo.
Ngaphandle kwalokho, uzodinga ama-plugins ambalwa ama-webhusayithi we-WP angawathola ewusizo. Ngicabanga nokuthi ukwenziwa kweinjini yokusesha kanye nokufakwe kunqolobane yesiza kuzobaluleka kakhulu. Ngingancoma I-WP-raket en I-Yoast SEO-webwerf.
UMaria Sharapova ungumdlali we-tennis omkhulu futhi wenza imali eyi- $ 22 miljoen ngokuvumela futhi okwamanje kuphela okungaphezu kwezingu- $ 2 wezigidi nge-toernooie zangempela.
Ngoba umsubathi ongathengiswa kakhulu futhi yisizathu esifanayo esenza ukuthi abahola cishe bonke abanye abadlali bomdlalo wetennis abangaba ngcono kunaye kwithenisi. Ngimthatha ngoba umehluko wemali engenayo ngokusebenzisa umsebenzi oyisisekelo wokuthola imali ngama-endossements kwisilinganiso se-10: 1. Uzothola ukuthi okufanayo kuyasebenza kakhulu komunye umdlalo othengiswayo. Abathandi bebhola, amaWorld Champions ku-Chess kanye nabasubathi abangama-Olimpiki bonke benza imali enhle ngokwenza izincomo.
Enye in ejwayelekile phakathi kwabo bonke abathengisi bemfashini abaphumelelayo engiyicwaningile – bonke banendaba eyingqayizivele nethembekile yokudlulisa. Ukuzama ukuqala isitolo sezitolo zemfashini ngaphandle kwendaba nophawu ongalukhulisa kahle kufana nokuzama ukukala intaba emimvini.
Okokugcina, ngithanda ukukukhomba lapho uthola khona izihloko ezimbili ezinhle kakhulu ezibonisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukumaketha, maqondana nokwakha isitolo semfashini esiku-inthanethi noma esingaxhuni.
Indlela Yokwakha I-multi-miljoen dollar e-handel Ibhizinisi Nge-Byna $ 0 njenge-budget Yokuthengisa.